Indlela yokufaka ii-terminals ze-Samsung ngoncedo lwe-smobile.com | I-Androidsis
Kule tutorial ilandelayo ixhaswe yividiyoNdiza kuchaza kubasebenzisi beeterminal ze-Samsung ngenkqubo yokusebenza ye-Android, ukuba ukhanyisa njani olu hlobo lweetheminali, usebenzisa izixhobo ezaziwayo ezifana odin yeWindows.
Kwinkqubo yokufunda, ndiza kukufundisa nendlela yokuhambahamba iwebhusayithi sammobile.com, enye iphepha elibalulekileyo yabo bonke abasebenzisi be izixhobo ezivela kwinkampani eyaziwayo yaseKorea.
Yonke le mithambo ndiza kuyenza ngokusekwe kwi Samsung Galaxy S, kuba sisixhobo endinaso ngoku, kodwa ngaphakathi kwewebhusayithi khamefm.com, uya kufumana izixhobo eziyimfuneko zokwenza nakwisiphi na isixhobo sophawu lweSamsung, kakhulu nge Inkqubo yokusebenza ye-Android nto leyo enomdla kuthi, njengayo nayiphi na enye inkqubo yokusebenza, ukusukela kule webhusayithi ikhankanywe apha ngasentla igubungela zonke iiterminal zeSamsung ezikhoyo ngoku.
Emva koko, ndiza kudwelisa amanyathelo alandelwe kufundiso lwevidiyo:
1 Ukubhalisa kwi-smobile.com
2 Ukukhuphela iifayile eziyimfuneko
3 Iingcebiso ezifanelekileyo zentsha
kweli nyathelo lokuqala kuyakufuneka bhalisa kwiwebhusayithi yamamobile.com, kuba ngayo Siza kufumana zonke iinkqubo eziyimfuneko kunye neefemwawa ngenkqubo ekhanyayo yesiphelo sethu Samsung.
Ukukhuphela iifayile eziyimfuneko
Kanye ngokuchanekileyo ibhalisiwe kwaye ichongwe ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, Siza kuqhubeka nokukhuphela yonke into eyimfuneko nokuhlaziya isixhobo yethu Samsung:
Okokuqala kuzo zonke kuya kuhamba Icandelo labaqhubi kwaye ukhuphele abaqhubi abahambelana nemodeli yethu yesiphelo.
Emva koko siza kuphuma ukhetho lweenkqubo, Las izixhobo eziyimfuneko ekukhanyiseni i-terminal yethu.
Okokugqibela siza kuyeka icandelo leefirmwares ukukhuphela ingxelo yokugqibela yakutshanje iyahambelana nemodeli yethu ethile.
Iingcebiso ezifanelekileyo zentsha
Kwinxalenye ye- iifemu, njengoko ndicacisa kwividiyo, kufuneka silumke kakhulu nge-firmware esiyikhethayoukusukela Iipakethe zexabiso.
Ezi ntlobo zohlaziyo ayizizo ezona zinto ziqinisekisiweyo, Endaweni yoko zihlaziyo ezivela kwisiseko samva nje, oko kuthetha ukuba Kuya kufuneka siqale kwisiseko sokugqibela okanye i-firmware epheleleyo ukuze kamva ube nakho ukufaka oku njengokuhlaziya.
Ukuba ujonga kufutshane uqeqesho lwevidiyo, Abasebenzisi be Samsung Galaxy Ssinayo Isiseko esigqibeleleyo se-firmware esiseJVU, Esi sisiseko esinconyelwayo ukuba sikhanyise njengesiseko sokuqala sexesha elizayo faka ukubuyiswa okulungisiweyo, Ukusuka apho faka iirom eziphekiweyo eyenzelwe ngokukodwa isixhobo sethu.
Emva kwe JVUsinayo Iipakethe ezimbini zexabiso o uhlaziyo ingaba yintoni JW4 kunye JW5, ezi zimbini, zihlaziywa, iya kufakwa kwisiseko seJVU ngaphandle kokujonga ukhetho lokwahlula kwakhona.
Ukuba awuqinisekanga ngento oza kuyenza, eyona nto intle kukuba ngaphambi kokuba uthethe nayo kwiiforamu ezikhethekileyo, kuba ngale ndlela uya kuthintela iintlungu ezininzi ezingeyomfuneko kunye nokucaphuka.
Kuhlala kucetyiswa, ngaphambi kokufaka naluphi na uhlaziyoJonga ukuba ikhona I-kernel ehambelanayo oko kusinika ithuba lokukhetha ingcambu kwaye ufake iClockworkMod Ukubuyisela kwisiphelo sethu, kuba kungenjalo, sakuba nje sihlaziyiwe asizukukwazi ukuyisusa okanye sibe ne-Recovery efanelekileyo, iya kuba kukukhanya kwakhona kwi-firmware yangaphambili.
Eyona forum ingcono yophando kunye nophuhliso lweetheminali Android, Yiforam eyaziwayo ye-xdadevelopers, kuyo unokujonga kwaye uqinisekise ukuba zikhona na Iinkozo eziguqulweyo nezihambelanayo zenguqulo ye-Android ofuna ukuyikhanyisa.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, XXJW4 yexabiso lokuhlaziywa kwepakethe efumanekayo yeOdin, I-Samsung Galaxy S, hlaziya nge-odin kwi-firmware 2.3.6 kunye neCF Root yayo
Khuphela - khamefm.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Indlela yokufaka ii-terminals ze-Samsung kunye nenkqubo yokusebenza ye-Android
Molo mhlobo, jonga ndibhaliswe kwi-sammobile, ndinika i-frimware kwaye ayifaki icandelo labaqhubi. Yintoni lento?
Qaphela ukuba bayitshintshile ifomathi yephepha, ngoku kuya kufuneka ukhethe imodeli yesiphelo.
Nge-08/09/2012 ngo-09: 55, «Disqus» wabhala:
Kulungile enkosi kakhulu! 🙂
USebastian Mendoza Riquelme sitsho
Hee mfondini, andikwazi kubhalisa, undixelele ukuba ufumene impazamo.
Phendula uSebastian Mendoza Riquelme
UIsabel Mebarak sitsho
Ndifuna uncedo lwakho undibongoza…. Ibonisa kuphela ukuphuculwa kwe-msg -firmware ekuhlangabezaneni nomcimbi. Nceda ukhethe indlela yokubuyisela kwi-Kies kwaye uzame kwakhona
Phendula uIsabel Mebarak
UMax Payne Mobile, umcuphi weza kwi-Android